WARARKA MAANTA | Bakool.net | Page 3
Home / WARARKA MAANTA (page 3)
Ciidamada Maraykanka oo duqeyntii saddexaad ka geystey Soomaaliya toddobaadkan
Milatariga Maraykanka ayaa xaqiijiyay in ay duqeyntii saddexaad qaadeen toddobaadkan iyadoo ay xoogeysatay weerarada duqeynta ah ciidamada Maraykanka ku hayaan Al-Shabaab sanadkan. Sida laga soo xigtey Taliska ciidamada Maraykanka ee Africa AFRICOM duqeyntii ugu dambeysay ayaa ka dhacday meel u dhow deegaanka Malayle ee gobolka Jubbada Hoose. Maraykanka ayaa sheegay in weerarkii ugu dambeeyay aysan ka qeybqaadan ciidamo lugta ah ...
Ra’iisul Wasaare Kheyre; “Waxaan rabnaa in laga shaqeeyo midnimada Ummadda Soomaaliyeed”
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre,ayaa sheegay in Safarkiisi Kismaayo uu ku soo dhamaaday guul iyo Miro dhal ku salaysan isfaham iyo in si dhab ah Dowladda Federaalka iyo Jubbaland u xoojiyaan wada shaqaynta loogu adeegayo Bulshadda Soomaaliyeed. kadib Xaflad sagootin ah oo Xalay Kismaayo loogu sameeyey Ra’iisul wasaare Kheyre, ayuu ugu horreyn kaga mahad celiyay sidii ay maamulka iyo Shacabka reer ...
Wasiirka waxbarashadda hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre oo maanta shir jaraa’iid ku qabtay xafiiskiisa ayaa jaamacaddaha dalka ku amray in aysan qaadan Karin ardey aan ka qeyb galin imtixaanka guud ee qaranka. “Maanta laga bilaabo wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go’aan ku gaartay islamarkana jaamacaddaha dalka ka ...
Japan oo Soomaaliya ka taageeraysa ka hortagga Qaraxyadda
Soomaaliya ayaa la filayaa in ay ka faa’iideysto ​​$ 1 milyan oo doolar oo ka imanaysa Dowladda Japan si ay u taageeraan mashaariicda ay fulinayso Hay’addaha Qaramada Midoobey gaar ahaan kuwo la dagaallama Miinooyinka iyo Qaraxyadda. Dowladda Japan ayaa sheegtay in ay muhiimad gaar ah siin doonto Barnaamijyadda looga hortaggaayo Qaraxyadda Waxyeeladda badan geysta ee Soomaaliya. Dowladda Japaan waxa ay ...
Ra’iisul Wasaaare Khayre Oo Guddoomiyay Shir Ay Yeesheen Wasiirrada Socdaalka Ku Wehliya Iyo Wasiirrada Jubaland (Sawirro)
Arbaco, Maarso 13, 2019 –Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa guddoomiyay shir ay Kismaayo ku yeesheen wasiirrada ku wehliya socdaalkiisa iyo wasiirrada wada shaqayntu kala dhexeyso ee ka tirsan dawlad gobaleedka Jubaland. Shirka Wasiirrada dhex maray oo uu sidoo kale goob joog ka ahaa madaxwaynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam, ayaa intiisa badan looga hadlay sidii ...
Dad badan oo ku dhintay Qarax maanta ka dhacay Suuq Xoolaha lagu iibiyo
Qarax miino oo dhulka lagu aasay ayaa maanta ka dhacay Suuq xoolaha lagu iibiyo oo kuyaala deegaanka Goof-Gaduud Buureey oo ka tirsan Gobolka Baay ee Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sida aan wararka ku helnay qaraxan ayaa lagu aasay goob mashquul badan oo katirsan Suuqa Xoolaha Goof-Gaduud oo maalmaha arbacada uu ka jiro mashquul badan laguna kala iibsado xoolaha. Inta la xaqiijiyay ...
Wafdigan oo uu hoggaaminayay madaxweynaha Dowlada Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta gaaray magaalada Diinsoor ee Gobolka Balkaasi oo siweyn loogu soo dhaweeyey. Ujeedada socdaalka wafdigan madaxweyne C/casiis Maxamed Xasan(Laftagareen) oo ay kamid yihiin xubno isugu jira xeer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ah sidii uu halkaasi uga furi lahaa mashaariic horumarineed. Waxaa siweyn ugu soo dhaweeyay degmada Diinsoor maamulka ...